Ceelgows.com » War Dag dag ah: Qalax lala damacsanaa Madaxweynaha cusub oo ka dhacay hotelka uu daganyahay hortiisa
War Dag dag ah: Qalax lala damacsanaa Madaxweynaha cusub oo ka dhacay hotelka uu daganyahay hortiisa Sep 12, 2012 - ujawaab	Qaraxa aya waxaa uu ka dhacay ilinka hore ee hotelka Jaziira ee uu madax weynaha cusub Pro. Xassan Shiikh ka dagan yahay Magaaladda Muqdihso.
Qaraxaan ayaa waxaa loo badinayaa in uu yahay qof isa soo miidaamiyey, lkn ilaa hadda ma wax faa faahin ah oo dhab ahi kama soobixin, goobta ayaa waxaa laga wadaa baaritaano inkasta oo aan ilaa hadda wax hadal ahi uusan kasoo bixin Ciidanka amaanka ee goobta ku sugnaa.
Waxaana kusoo qul qulaya goobta ciidamadda sida gaarkaa u taba baran iyo qarab wax lagu baaro oo aad loosoo kordhinayo.
Tags: muqdisho « PreviousLacag been abuur ah oo maanat lagu gubay Gaalkacyo	Next »Gaalkacyo: Gudomiyah gobolka Mudug oo ka qayb galay banaan bax lagu taagerayey madaxweynaha Cusub ee JFSoomaaliya.	Leave a Reply